Tallooyin ku Saabsan Xakamaynta Sixir-bararka | Yool News
Tallooyin ku Saabsan Xakamaynta Sixir-bararka
February 5, 2017 - Written by admin
Xukuumadda KULMIYE waxay qaaday tallaabooyin Xumad jebin ah oo aan ku dhisnayn cilmi dhaqaale & cilmi-maaliyadeed “Fiscal & Monetary Policy“. Xal maaha in shirar ma dhalays ah loo qabto Qaadwalayaasha & Sarriflayaasha . Xal maaha in lagu galgasho adeega Zaadka & E-Dahabka. Xal maaha in Habro durbaan sita la yidhaahdo taageera Dikreetada Guul Same Siilaanyo. Maanta Qiimaha halka doolar wuxuu suuqa madow ka jooga SH 9,000 . Xalka xaqiiqada ahi wuxuu ku jiraa in Xukuumadda Kulmiye deg-deg u fuliso tallaabooyinka soo socda:
1). In Xukuumaddu si deg deg suuqa u soo geliso $ 10 kii Million ee xaqul-qalinka ahaa ee Marwo Sam-Sam isku sawirtay. Taasi waxay keenaysa in xaddiga lacagta “Money Supply” ee shillinka Somaliland suuqa laga yareeyo oo qiimahiisu kor u kaco. Waxa doolarka laga iibinayaa oo qudha ganacsatada yar –yar iyo jeeblayaasha “ Licesnsed Small business owners”
2). In Xukuumadu si deg-deg u dhinto cashuurta dadban “ Indirect tax “ ee laga qaado quut-al-daruuriga “ Essential Goods “ sida Bariiska, Sonkorta, Saliida ,daqiiqda iwm, kuna samayso sicir-kaab “subsidy”
3). In Xukuumadu si deg-deg u kordhiso cashuurta dadban ee laga qaado alaabta aan daruuriga ahayn “ Luxury goods” sida sigaarka , qaadka , sharaabka ,baabuurta raaxada iwm.
4) In Xukuumadu deg-deg u dhinto qiimaha shidaalka “ FUEL” iyo qiimaha korontada. Waxaynu la socona in qiimaha shidaalku suuqa caalamiga ah hoos ugu dhacaday 56 % (from $ 115 per barrel to $ 52 per barrel “ .Waxba iskama bedelin qiimaha shidaalka ee gudaha Somaliland. Waxa sicir gooya dhiigmeerato ku xidhan Xukuumada Samawade Siilaanto.
5 )In xukuumadu deg-deg u kordhiso cashuurta tooska ah “Direct Corporate Income Tax” ee laga qaado dhiigmeeratada sida Dahabshiil, Deero Group, Omaar Group,Somcable; Telesom; laguna kaabo quut-al-dariiriga danyarto karsato.
6).In xukuumadu si deg-deg u kordhiso cashuurta laga qaado Hudheelada waawayn & fooq-yada dhaadheer “ Property-tax” ee ay dhistaan kuna raaxaystaan xaraan-quutayaasha, laguna kaabo quut-al-daruuriga danyarto cunto.
7) In la joojiyo kharashyada ka baxsan miisaaniyadda qaranka sida Gunooyinka waji-ku-macaashka; Gargardaadinta Col Muuse;Xafladaha xil-wareejinta;Shir-beleedyada ;buraanburka Qasriga Madaxtooyada imw.
.In Xawaaladaha laga mamnuuco inay dadwaynaha u furaan US Dollar Account “ Non-Resident Account.
9). In dhigaalka dawladda “ Gov’t doollar Deposits “ lagu beddelo Somaliland shiling deposits
10) In ganacsatada lagu waajibiyo inay dhigaalkooda lacageed “ Private dollar Deposits” ku bedeshaan Somaliland shilling.
11).In Bankiga Dhexe la siiyo awood buuxda uu ku maamulo Bangiyada“ “Banking supervision authority“
Drs Hoodo Yusuf,UK, yhoodo@yahoo.com.
Ururka Wadaniga ah ee Vosomwo oo Si Balaadhan Uga Wacyigeliyey Bulshada Xaafada Daami Xanuunka Covid19 iyo Qalabka Badbaada oo loo Qaybiyey Dad-danyar ah…
Daawo: Taliye Ku-xigeenka Ciidanka Dab-demis oo Dacwad ka Gudbiyey Taliye Sawaaxili oo u Awood Sheegtay, Kana Saaray Xerada… Xaalada Ciidamada Dab-demiska oo Dumisku Dhow
Gudoomiyihii hore ee Wakaalada Wadooyinka oo Is-casilay iyo Madaxweyne Muuse Biixi oo Xilka u Magacaabay Gudoomiyihii ee Koomishanka Ciise Xamari… Mashruuca wadada Berbera Corridor oo Gaabis Hadheyey..
Masuul ka Tirsan Tirsan Xisbiga Waddani oo Looga Yeedhay Xarunta Danbi baadhista C.I.D-da Hargaysa
La-taliyaha Madaxweynaha ee arimaha Bulshada oo ka Warbixiyay Diyaarado Maanta ka Degay Madaarka Magaalada Burco